size Sandblasting Market Media ayaa la filayaa in ay gaaraan 441,9 milyan USD by 2023 - Shiinaha Shanghai Bosun sugi lahaayeen
size Sandblasting Market Media ayaa la filayaa in ay gaaraan 441,9 milyan USD by 2023
Sandblasting size Market Media la filayaa in ay koraan at 6.5% CAGR ka 2016 si ay u 2023. size suuqa warbaahinta sandblasting Global, marka la eego mugga, ayaa lagu wadaa in ay koraan oo kaliya ka yar 6% CAGR. US sandblasting size suuqa saxaafadda waa in ka badan 96 milyan oo doolar by 2023.
nidaamka engeeg joofane sii kordheysa qaatay si kor loogu qaado baaxadda sandblasting size suuqa warbaahinta meelaha baahida tayada aan ka kaafiyey by xal qalabaynta caadiga ah. Warshadaha oo ay ku jiraan qalabka korontada aerospace, baabuurta, caafimaad iyo macaamiisha isticmaalaan qalab this dhowr codsiyada oo ay ku jiraan wax ka saarista, gargaarka stress, nadiifinta caaryada, diyaarinta dusha, ka saarida daahan iyo shot peening.
Tilmaamo Optional bixiyeen sida Howlsocodsiinta gacanta positioner Rotary, xakamaynta qulqulka warbaahinta iswada, qaraxa si toos ah gacanta cadaadis, awoodaha warmo Rotary, caadadii xog ururinta, Qarni warbixinta, soo kabashada si toos ah ay u badan tahay in la wado baahida. US sandblasting size suuqa warbaahinta la saadaalinayaa in ka badan 96 million USD by 2023.
Sandblasting codsiyada suuqa warbaahinta waxaa ka mid ah isticmaalka abrasives si ay u dhinto, roughen, meelaha siman, nadiif ah ama polish, ama in meesha laga saaro wax-u-habeynta dhinacyada dusha ama qaababka. Intaa waxaa dheer, kuwaas oo qayb ka sugi lahaayeen waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in foomamka dahaarka leh oo wada shaqayn dhowr codsiyada oo ay ku jiraan qiraan, goynta, dhameystir dusha, iyo ku shiidi. Warshadaha sida dhismaha, baabuurta, aerospace iyo warshadaha waa meelaha ugu waaweyn ee dhamaadka-isticmaalka.
fikradaha muhiimka ah ee warbixinta waxaa ka mid ah:
xabagta Aluminum suuqa-engeeg sugi lahaayeen xisaabay in ka badan 10% share industry ee 2015 iyo la saadaalinayaa in ay koraan at 7.2% CAGR ka 2016 si ay u 2023. Waxaa la doorbiday ee codsiyada gaar ah, taas oo u dhameystiray dusha gaar ah ayaa loo baahan yahay in xaq ka dhiga qiimaha dheeraadka ah.
shot Steel iyo goobtii ayaa la filayaa in ay helaan share warshadaha weyn ka 2016 si ay u 2023 aaneynayo isticmaalka ballaaran ee qaraxa nadiifinta qaybta eedda ka mid ah baaxadda dhagaxshiidka, iyo rinjiga iyo miridhku ka dusha birta.
share silica suuqa warbaahinta sandblasting heysatay isticmaalka caalamiga ah ee 2015. baahida Tani waxay ugu horayn u billaabay ka Asia Pacific, halka ay wax u arko isticmaalka ballaaran ay sabab u tahay maqnaanshaha of xeerarka la mid ah kuwa arkay dalal muhiim ah Yurub, iyo sidoo kale hal dhibic qiimaha hoose marka la barbar dhigo qalabka kale.
Asia Pacific sandblasting share suuqa warbaahinta oo ahaa 45% in 2015. qaybta alaabta raagaya weyn oo sii kordhaya kharashka kaabayaasha waa wanaagsan ee gobolka.
waqti Post: Aug-15-2016